Agung မီးတောင်မှ ပြာများ မှုတ်ထုတ်နေသောကြောင့် ဘာလီလေဆိပ်ကို ဆက်လက် ပိတ်ထားရဆဲ - Yangon Media Group
ဂျာကာတာ နိုဝင်ဘာ ၂၈
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီကျွန်းရှိ Agung မီးတောင်ပေါက်ကွဲနေရာမှ မီးတောင်ပြာများ ထွက်ပေါ်နေသည့် အတွက် ယင်းကျွန်းပေါ်ရှိ I Gusti Ngurah Rai နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကို နောက်ထပ် ၂၄ နာရီ ထပ်မံပိတ်ထားလိုက်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ သည်။
ဒေသတွင်းလေကြောင်း အချက်ပြအာဏာပိုင်များကထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာထဲတွင် လေယာဉ်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများတွင် မီးတောင်ပြာများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ဟု ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြေညာချက်တစ်ခုကဆိုသည်။ လေဆိပ်ကို နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၇ နာရီအထိ ပိတ်ထားမည်ဟုဆိုသည်။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကနဦးတွင် တစ်ညလုံးပိတ်ထားရသည့် လန်ဘော့လေဆိပ်ကို ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပေး လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သီးခြားနှိုးဆော်စာ ထဲတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
အနီးနားရှိ ပြည်နယ်များအပါအဝင် ပြည်တွင်းလေကြောင်းပျံသန်းမှုများ ရှောင်လွှဲပြေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် လေကြောင်းလိုင်းများအတွက် လေဆိပ် ၁၀ ခုကိုလည်း သီးခြားစီပြောင်းရွှေ့ပြင်ဆင်ပေးထားသည်။ Agung မီးတောင်သည် ဘာလီကျွန်းအရှေ့ဘက် တွင် ရှိပြီး အမြင့် မီတာ ၃၀၀၀ ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့တွင် မီးတောင်ပတ်ဝန်းကျင် တွင်နေထိုင်ကြသော ဒေသခံ ၁ သိန်းခန့်ကို ချက်ချင်းနေ ရာရွှေ့ပြောင်းကြရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၅၄ နှစ်အတွင်း အကြီးမားဆုံးပေါက်ကွဲ မှုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။
တောင်ထိပ်မှ ၈ ကီလိုတာနှင့် ၁၀ ကီလိုမီတာအထိ ဒေသကို ကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ Agung မီးတောင်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၁ ထောင်ကျော်ကို သေဆုံးစေခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကျောက်ခဲပူ၊ ပြာပူ၊ ချော်ရည်နှင့် မီးတောင်တောင်စောင်းမှ လွင့်ကျလာသော ရွှံ့စေးတို့ကြောင့် ရွာပေါင်းများစွာ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းများ အပ်နှံသူများအား ဆုကြေးနှင့် ဂုဏ်ပြုလွှာချီးမြှင့်
ဖမ်းဆီးခံ မှန်စတေကာကပ် တက္ကစီယာဉ်များ ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ထားသော်လည်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်း??
နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ကြာမှ ပြန်လည် ကျင်းပခဲ့သည့် ရိုးရာလှေပွဲသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုသူ များပြား??